Fotoana aseho ho an'ny Starbuck Glow-in-the-Dark Tumbler 'Beetlejuice' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Fotoana fampisehoana ho an'ny Tumbler Starbucks Glow-in-the-Dark Tumbler 'Beetlejuice'
Ny tumbler amin'ny be indrindra
by Trey Hilburn III Aogositra 8, 2021
by Trey Hilburn III Aogositra 8, 2021 40,427 hevitra
Ny matoatoa miaraka amin'ny be indrindra dia niditra amina endrika amam-panahy avy amin'ny Starbucks. Raha sahirana namaky ny halalin'ny Etsy izahay dia nahita crossover tena mahafinaritra ho an'i Beetlejuce ary ofisialy Starbucks.
Ity epoxy mahatalanjona sy vinyl ity dia afaka mitambatra tanteraka amin'ny endrik'i Starbucks ary manolo ny logo miaraka amin'ny Beetlejuice. Ilay tumbler dia miaraka amina endrika miloko mainty sy fotsy mitovy amin'ny fiakanjon'ny akanjo mahazatra azy. Ny kaopy koa dia mamita tsara ny endrik'ilay zavatra rehetra amin'ny alalàn'ny hazavana manjelanjelatra izay mitete eo amin'ny sisiny.
Mpanakanto Etsy MulberryTribe dia manome ity famaritana ity ao amin'ilay pejy.
“Mifamadika amin'izay hividianako ny tumblers amin'izao fotoana izao mba ho tsikaritrareo ny fahasamihafana amin'ny lisitra nataoko! Ny haben'ny haben'ny toetrako no ho endrik'ireo mpikapa ankehitriny. Izy ireo dia LALANA tsara kalitao. Manana sarony savily misokatra sy akaiky izao izy ireo, ny mahia sy ny ankizy 12 ans dia miaraka amina mololo plastika mafy!
Tumblers dia mifono epoxy ho lava fiainana. Azafady soraty ao anaty boaty "naoty ho an'ny mpivarotra" amin'ny fizahana miaraka amin'ny anarana (s) tianao amin'ny kaopinao (raha ilaina)
Azafady, avelao ny roa herinandro farafahakeliny handefasana, ireo tumblers ireo dia mifono epoxy eken'ny FDA.
Raha manana fangatahana manokana tianao hatao ianao na misy fanontaniana, dia andefaso hafatra aho na manaova lisitra manokana! ”
Afaka mandeha ianao ETO hanafarana ny anao manokana.
Inona no hevitrao momba ilay mpanentana an'i Beetlejuce avy ao amin'ny Starbucks? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.